एनआरएनए पोर्चुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्षको दादागिरी, समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारलाई नै कुटे ! - VON TV
Friday February 28, 2020 |
एनआरएनए पोर्चुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्षको दादागिरी, समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारलाई नै कुटे !
२८ माघ २०७६, मंगलवार ०२:२८ 1172 ??? ???????
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पोर्चुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भिमसेन थापाले पोर्चुगलस्थित सकृय पत्रकार सबिन धिताल ( प्रविन ) माथि हातपात गरेका छन् ।
राजधानी लिस्बोनमा आइतवार सम्पन्न एक कन्सर्टको रिपोटिगं गर्न पुगेका पत्रकार घिताललाई कार्यवाहक अध्यक्ष थापाले कुटपिट गरेका हुन् । थापाको कुटाईबाट घाइते भएका घितालले स्थानिय अस्पतालमा उपचार गराएका थिए ।
पोर्चुगलस्थित नेपाली मिडियाहरुले संघभित्रका गलत गतिबिधि र रबैयाहरुको बिरुद्धमा खरो रुपमा कलम चलाउदै आएका छन्। पछिल्लो समयमा भोइस अफ नेपालले केहि महिनादेखि प्रोतुगलमा कृषि कामदारहरुको पिडा, ठगी र मानव तस्करीको बारेमा लगातार फलोअप समाचार प्रकाशन गर्दै आईरहेको छ। धिताल भोइस अफ नेपाल टिभी र प्रोतुगलमा रहेका पत्रकारहरुको संस्था नेप्लिज जर्नालिष्ट क्लबमा आबद्ध छन् । पत्रकार धितालको मिडियासँग भएको संलग्नता र सुचना दिएको भन्दै संघका उपाध्यक्ष थापाले कुटपिट गरेका हुन्।
कुटपिटबाट घाइते पत्रकार धिताल !
संघका उपाध्यक्ष थापाले नेपालीहरुलाई कुटपिट गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। उनले यसघि पनि कयौ नेपालीहरुलाई धाकधम्की दिने र कुटपिट गर्ने गरेका छन्। थापाले कुटपिट गर्नेहरुलाई बाहिर सुचना दिने ज्यानमार्ने सम्मको धम्की दिने गरेकाले पिडितहरु बोल्नै डराउछन्।
थापालाई पोर्चुगलको नेपाली समुदायका केही अग्रजहरुले प्रयोग गर्ने र उनको बचाउ गर्नेगरेको समुदायको गुनासो छ। निज थापाले यसघि पनि एक नेपालीको व्यवसायस्थलमै गएर कुटपिट गरेका थिए। यत्ति मात्रै होइन, उनले एक नेपाली महिलालाई सार्वजनिकस्थलमै कुटेका थिए। पछिल्लो समय एक अर्का नेपालीलाई टाउकोमा हिर्काएर रगताम्ये बनाएका थिए। तर पनि पिडितहरु बोल्नै डराउछन् , किन कि नेपाली समाजका केही अगुवाहरु उनको बचाउमा उभिएका छन् ।
पोर्चुगलमा वर्क भिषाका पिडितहरुलाई एनआरएनए अध्यक्षको प्रश्न : मिडियालाई सुचना कसले दियो ?
सामाजिक अगुवाहरुसँग समेत सहयोग माग्दा कतैबाट सान्त्वना समेत नपाएपछि पत्रकार धितालले घटना भएको एक दिनपछि आफ्नो फेसबुक वालमा लामो स्त्याटस लेख्दै भनेका छन् , ” घटना घटेको २४ घण्टासम्म मैले कुरेर बसे, तर पनि सरोकारवाला निकायबाट खासै चासो भएन। स्वयं संघका साथीहरु मौन छन्। घटनाको बारेमा जानकारी भएर पनि अध्यक्ष मौन छन्। नेपालीहरुको सामुहिक संस्था भनिएको एनआरएनए का पदाधिकारीबाटै नेपाली कुटिन्छन र यहाँ संघसंस्थाहरु मौन भईदिन्छन्। ”
पत्रकार धितालले गुनासो गर्दै लेखेका छन् , ” कुनै दिन यस्तै घटनामा कसैको मृत्यु भयो भने यहाँका संघसंस्थाहरु र तिनका प्रतिनिधिहरुले श्रद्दान्जली दिन आउदा त्यसको औचित्य के होला ? अलिकति लज्जा बोध होला कि नहोला ? के एनआरएनए यस्तै गुण्डागर्दी गर्ने संस्था हो ? पोर्चुगलका नेपालीहरुले एनआरएनए बाट आशा गर्ने यस्तै कार्य हो ? हामी कस्तो संस्कार बिकास गर्दैछौ पोर्चुगलमा ? हाम्रा भावी सन्ततिले सिक्ने होलान् ? ”
पत्रकार धितालले अगाडी भनेका छन् , ” एनआरएन मा बसेर यस्तो किसिमको घृणित र उद्धण्ड कार्य गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन र हुनुहुदैन। म एक पटक फेरी पोर्चुगलमा रहेका सम्पूर्ण संघसंस्थाहरु , सरोकारवाला निकायहरु र नेपाली कन्सुलेट यो घटना र बिषयमा गम्भीर भईदिन हुन अनुरोध गर्दछु।”
आक्रमणकारी थापाले पत्रकार धिताललाई समाचार लेखे दुवै हात काटिदिने र जिन्दगी बर्बाद गरिदिने धम्कि दिँदै उनले भनेका छन् ‘मैले कुटें भन्दै लेखिस भने मारेर फाल्दिन्छु र बरु गएर जेल बस्छु ।’ धिताललाई कुटेको समाचार अरु कसैले अन्यत्र कतै दिए तिनलाईसमेत नछोड्ने भन्दै उनले अन्यलाईसमेत धम्काएका छन् ।
प्रोफाइलभित्र छिरेर, मान्छेभन्दा राम्रो फोटो छानेर, भँगेरे अक्षरमा बधाई नलेख्न अनुरोध गर्दछु ।
पोर्चुगलमा नयाँ कोरोनाभाइरसको ७ संदिग्ध व्यक्ति अनुसन्धानमा, कुनै पुष्टि भएका घटनाहरू छैनन् : प्रधानमन्त्री एन्टोनियो कोस्टा
डा. सुधीर रूपारेलिया युगान्डाका लागि नेपाली मानार्थ कन्सुलर नियुक्त !
भोइस अफ नेपाल बिरुद्ध अध्यक्ष गैरेले गरे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी !
बलेवा सेवा समाज पोर्तुगल दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न, गंगा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन !
एनआरएनएले गठन गरेको नेपाल भ्रमण बर्ष विशेष समितिको अध्यक्षमा भट्ट नबस्ने !
एनआरएनलाई दलाल र भू-माफीयाले फसाए : अध्यक्ष पन्त
पोर्चुगलमा एकदिने व्यक्तित्व विकास तालिम सम्पन्न !
साम्राज्ञीको नजरमा ५ हिरो !
देश गरिब भए पनि शासकका सुविधा विश्वकै एक उच्चतम, कसै न कसैले त देशको बारे सोच्नु नि ?
प्रियंका र आयुष्मान बिहे बन्धनमा बाँधिए
पत्रकारितालाई पेशा र पैसासँग मात्रै तुलना गर्नु न्यायोचित होला ?
गगन थापाको आरोप: ‘प्रधानमन्त्री यताबाट हेरेपनि, उताबाट हेरेपनि यतीबादी’ ( भिडियो सहित )